Maxkamadda Minnesota oo soo gaba-gabeeysay xukunadii ay ku qaadeysay dhalinyaro Soomaaliyeed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamadda Minnesota oo soo gaba-gabeeysay xukunadii ay ku qaadeysay dhalinyaro Soomaaliyeed
Maxkamadda magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa maalintii shalay soo gaba-gabeeysay xukunadii ay ku qaadeysay dhalinyaro Soomaaliyeed, kuwaas oo lagu soo oogay inay ku biiri rabeen kooxda argagaxisada ah ee Daacish.
Ilaa seddax dhalinyaro Soomaali oo ka mid ah sagaalka dhalinyaro ee maxkamada lasoo taagay ayaa maalintii shalay xukunkoodii lagu soo gaba-gabeeyay, iyadoona labadii maalmood ee lasoo dhaafay xukuno kala duwan lagu qaaday 6 kale oo Soomaali ah, kuwaas oo dhamaantood lagu eedeeyay inay ku biiri rabeen kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Syria iyo Ciraaq.
Seddaxda maalintii shalay xukunka lagu riday ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed C/xamiid Faarax, C/raxmaan Daa’uud iyo Guuleed Cumar, waxayna maxkamadda sheegtay inay qalab ku taageeri rabeen kooxda Daacish iyo sidoo kale inay qorsheynayeen inay u socdaalaan dalka Syria, kuna biiraan kooxdaas.
Guuleed Cumar ayaa lagu xukumay 35 sano oo xabsi ah, kadib markii oo lagu eedeeyay inuu ahaa hogaamiyihii kooxda dhalinyaradda ee ku biiri laheyd kooxda Daacish.
Sidoo kale, Maxamed C/xamiid Faarax iyo C/raxmaan Daa’uud ayaa lagu kala xukumay min 30-sano oo xabsi ah.
Xukunka seddaxdaasi dhalinyaro ee shalay la xukumay ayaa ahaa kuwii ugu muddada dheeraa, marka loo eego xukunadda lagu riday 6-dii dhalinyaro ee maalmihii isniinta iyo talaadada lasoo dhaafay lagu wada xukumay.
Dhinaca kale, saraakiisha FBI-da Mareykanka ayaa sheegay inay dhowrkii sanno ee lasoo dhaafay ay tobaneeyo dhalinyaro ah ka tageen gobalka Minnesota, islamarkaana ay ku biireen kooxda Daacish oo ka dagaalanta dalalka Syria iyo Ciraaq.